Aorian’ny volana jolay : hakatona ny sekoly tsy ara-dalàna | NewsMada
Aorian’ny volana jolay : hakatona ny sekoly tsy ara-dalàna
Ho hentitra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena manomboka amin’ity taona ity. Manome fe-potoana hatramin’ny volana jolay ho an’ny mpitantana sekoly tsy miankina rehetra ny tomponandraikitra hikarakarana ny taratasy fahazoan-dalana hisokatra sy hampianatra. Betsaka ny sekoly miahy tena mitsangana sy mandray mpianatra, nefa tsy ara-dalàna akory ny taratasy ara-panjakana. Ny ray aman-dreny koa tokony ho mailo ka hanontany amin’ny Cisco na Dren momba ny sekoly ampidirany ny zanany. Raha amin’ny kilasy manao fanadinam-panjakana ilay mpianatra, raha tsy ara-dalàna ilay sekoly, voatery manao mpiadina miahy tena fa tsy atolotry ny sekoly izy raha tsy voakarakara ny antontan-taratasy mazava.
Aorian’ny volana jolay, ho avy amin’izay ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena isaky ny sekoly hanara-maso ny antontan-taratasy ary hanakatona izay tsy ara-dalàna rehetra. Hafindra amin’ny sekoly manara-dalàna ny mpianatra eny anivon’ireny ivontoeram-pampianarana hakatona ireny.
Araka ny lalàna, olona manana ny mari-pahaizana bakalorea vao afaka manokatra sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa fototra. Tsy maintsy manana ny diplaoma licence na mitovy lenta amin’izay fara faharatsiny ny tomponandraikitra hanangana lycée tsy miankina. Amin’izao fotoana izao, betsaka ny toeram-pampianarana misokatra ary maro no tsy manaraka ny fenitra na eo amin’ny fotodrafitrasa fotsiny aza. Tsy lazaina intsony ny kalitaon’ny fanabeazana omena ny zaza raisiny.